Ny fampisehoana marina ny vidin'ny tsindry famatrarana rivotra dia mety ny mijery sy manamboatra azy ireo mifanaraka amin'ny filan'ny asa samihafa.
Raha misy tsy fahampian'ny herinaratra tampoka ampiasaina dia mba fehezo aloha ny bokotra faneriterena amin'ny fanjakana mihidy.
Ny valizy fiarovana miaraka amin'ny famehezana tsara dia hipoitra automat-ically rehefa avo loatra ny tsindry valizy fiarovana mba hiantohana safetya
Takelaka vy mahazatra, henjana avo, tanjaka sy faharetana avo lenta, tsy misy fivoahan'ny rivotra ary azo antoka kokoa.
Ny kodiarana vita amin'ny hoditra malemy sy mahatohitra ary manafintohina dia manana fiainana maharitra, ary mety kokoa ny miasa sy mihetsika.
● compresseur rivotra entin'ny fehikibo azo entina;
● Paompy rivotra vy maharitra maharitra;
● piston Aluminium sy peratra piston vita amin'ny alikaola ho an'ny famoahana be;
● Valizy mora mivelatra;
● Fanerena faneriterena miaraka amina fanerena fanerena;
● Regulator misy refy hanehoana tsindry;
● Mitondrà tànana raha mora mihetsika;
● Vovo fandrakofana vovoka;
● Mpiambina vy amin'ny fiarovana ny fehikibo sy kodiarana;
● Hafainganam-pandeha ambany, androm-piainana lava kokoa ary tabataba ambany kokoa;
● Misy fanamarinana CE;
● Mety amin'ny fampiharana an-trano sy indostrialy.
MODELY fahefana Clinder Hafainganana Fanaterana ny rivotra tsindry tanky NW lafiny
HP KW Dia (mm) * TSIA. isa-minitra L / min bara L KG MG
BDL-1051-30 0.8 0,55 F51 * 1 1050 72 8 30 42 750x370x610
BDV-2051-70 2 1.5 F51 * 2 950 170 8 50 50 800x380x700
BDV-2051-70 2 1.5 F51 * 2 950 170 8 70 59 1000 × 340 × 740
BDV-2065-90 3 2.2 F65 * 2 1100 200 8 90 69 1110 × 370 × 810
BDV-2065-110 3 2.2 F65 * 2 1050 200 8 110 96 1190 × 420 × 920
BDW3065-150 4 3 F65 * 3 980 360 8 150L 112 1300x420x890
BDV-2090-160 5.5 4 F90 * 2 900 0.48 8 160 136 1290 × 460 × 990
BDW-3080-180 5.5 4 F80 * 3 950 859 8 180 159 1440 × 560 × 990
BDW-3090-200 7.5 5.5 F90 * 3 1100 995 8 200 200 1400z530x950
1. baoritra fanondranana fenitra na baoritra miloko namboarina;
2.Honeycomb baoritra koa misy.
3.Pallet hazo na boaty hazo no misy.
Teo aloha: 2naona hatramin'ny 8inch azo alentika ao anaty rano ao anaty lavadrano
Manaraka: BM Type 2HP / 24L & 50L Direct-Driven Air Compressor miaraka amin'ny CE / UL Certification